Igodo 5 nke ikuku, gini ka ha bu? gịnị ka ha bụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Dị ka anyị hụrụ na post gara aga, ndị Earth Plan O nwere otutu uzo di na ime ya ma nwekwa ano. Na akwa ụwa ha nọ na mbara igwe nke mbara ala. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ihe omuma, na mpaghara ụwa ebe ndụ na-etolite. Mmiri hydrosphere bụ akụkụ nke ụwa ebe mmiri dị. Anyị nwere naanị sistemụ ndị ọzọ nke mbara ala, ikuku. Kedu ihe bụ oyi akwa nke ikuku? Ka anyị hụ ya.
Ikuku bụ oyi akwa gas nke gbara ụwa gburugburu ma nwee ọrụ dịgasị iche iche. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ eziokwu nke obibi ego nke oxygen dị mkpa iji bie. Ọrụ ọzọ dị mkpa nke ikuku nwere maka ndị dị ndụ bụ ichebe anyị pụọ na ụzarị anyanwụ na ihe ndị si na mbara igwe site na mbara igwe dịka obere meteorites ma ọ bụ asteroids.
2 Kedu ihe bụ oyi akwa nke ikuku?
2.1 Ebe nchekwa
2.2 Oke ala
3 Akụkọ banyere ikuku
Ejiri ikuku dị iche iche na ikuku dị iche iche. Ọ na-anọkarịrị mejupụtara nitrogen (78%), Ma nitrogen a na-anọpụ iche, ya bụ, anyị na-eku ume ya mana anyị anaghị emetụta ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe ọ bụla. Ihe anyi ji ebi ndu bu oxygen hụrụ na 21%. Ihe nile dị ndụ n’elu ụwa, belụsọ ụmụ nje anaerobic, chọrọ ikuku oxygen. N'ikpeazụ, ikuku nwere a nnọọ ala ịta (1%) site na gas ndị ọzọ dịka vapo mmiri, argon, na carbon dioxide.
Dị ka anyị hụrụ n’isiokwu ahụ ikuku ikuku, ikuku dị arọ, ya mere enwere ikuku karịa na oyi akwa nke ikuku n'ihi na ikuku si n'elu na-akpali ikuku dị n'okpuru ma dị nkụ na elu. Ọ bụ n'ihi nke ahụ 75% nke mkpokọta oke ikuku ọ dị n’agbata ụwa na kilomita iri na otu mbụ n’ogo. Ka anyị na-etolite na mbara igwe, ikuku na-adịwanye ntakịrị ma na-adị gịrịgịrị, agbanyeghị, enweghị akara ndị na-egosi ọkwa dị iche iche nke ikuku, mana ọtụtụ ma ọ bụ obere ihe mejupụtara na ọnọdụ na-agbanwe. Usoro Karman, ihe dị ka 100 km n'ogo, a na-ahụta njedebe nke ikuku ụwa na mmalite nke oghere dị n'elu.
Kedu ihe bụ oyi akwa nke ikuku?
Dị ka anyị kwurula na mbụ, ka anyị na-arịgo, anyị na-ezute ọkwa dị iche iche nke ikuku nwere. Onye obula nwere ihe ndi mejuputara, njuputa ya na oru ya. Elu ikuku nwere okpukpu ise: Na troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, na exosphere.
Akwa nke ikuku. Aha njirimara: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Akpa oyi akwa nke ikuku bụ troposphere na bụ kacha nso n’elu ụwa ya mere, ọ bụ na oyi akwa ka anyị bi. O sitere na oke osimiri wee ruo ihe dịka 10-15 km n’ịdị elu. Ọ bụ n'ime ebe a na-emepụta ndụ n'ụwa. Gafere troposphere ọnọdụ ekwela ka mmepe nke ndụ. Okpomọkụ na ikuku nke ikuku na-ebelata na troposphere ka anyị na-abawanye elu nke anyị nọ.
Ihe omuma banyere ihu igwe dika anyi mara ha na eme na ebe ndi ozo, ebe obu na igwe ojii adighi ari. A na-akpụpụta ihe ndị a gbasara ihu igwe site na kpo oku na-enweghị oke nke anyanwụ na-eweta na mpaghara dị iche iche nke ụwa. Ọnọdụ a na-akpata convection nke okwukwo na ikuku, nke nwere mgbanwe na nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ, na-ebute ajọ ifufe. Airgbọ elu na-efegharị n’ime ebe ahụ ma dịka anyị kpọburu aha na mbụ, n’èzí ebe ahụ ka igwe ojii adịghị, yabụ enweghị mmiri ozuzo ma ọ bụ oké ifufe.
Onodu ubochi na-adi n’ime ebe anyi bi. Aha njirimara: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
N'akụkụ kasị elu nke troposphere anyị na-ahụ ókèala a na-akpọ tropopause. N’akụkụ ókèala a, ọnọdụ okpomọkụ na-erute oke nkwụsi ike nke kachasị. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị ji akpọ oyi akwa a dị ka "Kwesiri oyi akwa" Maka na site ebe a, alụlụ mmiri dị na troposphere enweghị ike ịrị elu ọzọ, ebe ọ na-amata mgbe ọ gbanwere site na vapo na ice. Ọ bụrụ na ọ bụghị maka tropopause, ụwa anyị nwere ike tufuo mmiri anyị nwere ka ọ na-agba ma na-akwaga na mbara igwe. Nwere ike ịsị na tropopause bụ ihe mgbochi a na-adịghị ahụ anya nke na-eme ka ọnọdụ anyị kwụsie ike ma na-enye ohere ka mmiri dịgide ruo.
N'ịga n'ihu na oyi akwa nke ikuku, anyị na-ahụ ugbu a stratosphere. Achọtara ya site na tropopause ma gbasaa site na 10-15 km n'ogo ruo 45-50 km. Ọnọdụ okpomọkụ dị na stratosphere dị elu karịa n'akụkụ nke ala ebe ọ bụ na ọ na-abawanye n'ịdị elu, ọ na-etinyekwu ụzarị anyanwụ ma ọnọdụ okpomọkụ gị na-abawanye. Nke ahụ bụ ịsị, omume nke okpomọkụ n'ịdị elu dị iche na nke ahụ na troposphere. Ọ na - amalite kwụsie ike mana ọ dị ala ma ka elu na - abawanye, ọnọdụ okpomọkụ na - abawanye.
Mmiri nke ọkụ ọkụ bụ n'ihi ozone oyi akwa nke di n’agbata kilomita iri ato na iri ano n’ogologo. Ozone oyi akwa bụ ihe ọzọ karịa ebe ozone ịta ahụhụ ozone dị elu karịa nke fọdụrụ na mbara igwe. Ozone bụ ihe na-echebe anyị pụọ na ụzarị anyanwụ na-emerụ ahụMana ọ bụrụ na ozone na-eme n’elu ụwa, ọ bụ mmetọ siri ike nke ikuku na-ebute anụ, ọrịa iku ume na ọrịa obi.
Aha njirimara: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Na stratosphere enweghi ihe ngaghari na uzo ikuku, ma ikuku di na uzo ozo puru iru ọtụtụ mgbe 200 km / h. Nsogbu nke ikuku a bu na ihe obula nke rutere n'osimiri a gbasaa na uwa dum. Otu ihe atụ nke ndị a bụ ndị CFC. Ikuku ndị a nke chlorine na fluorine mejupụtara na-ebibi ozone oyi akwa ma gbasaa na mbara ụwa n'ihi ikuku siri ike sitere na stratosphere.
Ná ngwụsị nke stratosphere bụ stratopause. Ọ bụ mpaghara ikuku ebe ikuku ozone dị elu na okpomọkụ na-adị ezigbo (karịa 0 Celsius). Stratopause bu nke n’enye uzo.
Ọ bụ oyi akwa nke ikuku nke si na 50 kilomita ruo karịa ma ọ bụ karịa 80 km. Omume nke okpomọkụ na mesosphere yiri nke troposphere, ebe ọ na-agbadata na elu. Oyi akwa nke ikuku, n'agbanyeghị oyi, nwere ike ịkwụsị meteorites ka ha na-ada na mbara ikuku ebe ha na-ere ọkụ, n'ụzọ dị otú a ha na-ahapụ ihe ọkụ ọkụ na mbara igwe n'abalị.
The mesosphere bụ thinnest oyi akwa nke ikuku, ebe naanị nwere 0,1% nke ngụkọta ikuku ikuku na ya a ga-enweta okpomọkụ ruru -80 degrees. Mmeghachi omume kemịkal dị mkpa na-apụta na oyi akwa a na n'ihi njupụta nke ikuku, a na-etolite ọgba aghara dị iche iche nke na-enyere ụgbọelu aka mgbe ha laghachiri n'ụwa, ebe ọ bụ na ha malitere ịchọpụta nhazi nke ikuku ikuku na ọ bụghị naanị breeki aerodynamic. nke ụgbọ mmiri.
Na njedebe nke mesosphere bụ mesopause. Ọ bụ oke oyi akwa na-ekewa mesosphere na temprechọ. Ọ dị ihe dịka 85-90 kilomita n'ịdị elu na n'ime ya ọnọdụ okpomọkụ kwụsiri ike ma dịkwa ala. Chemiluminescence na aeroluminescence mmeghachi omume na-ewere ọnọdụ na akwa a.
Ọ bụ mbara nke kacha saa mbara. Ọ na-esite na 80-90 km ruo 640 km. N'oge a, enweghi ikuku ọ bụla fọdụrụ na ihe ndị dị na oyi akwa a site na ụzarị ultraviolet. A na-akpọkwa oyi akwa a ionosphere n'ihi nkwekọrịta nke ion ndị na-eme n'ime ya. The ionosphere nwere mmetụta dị ukwuu na mgbasa nke ebili mmiri redio. Akụkụ nke ike radira nke na-ebugharị na ionosphere na-etinye uche site na ikuku ikuku ma na-emegharị ọzọ, ma ọ bụ na-emegharị, na-eche ihu n'elu ụwa.
Ọnọdụ okpomọkụ dị na temomosphere dị oke elu, na-eru ruo ọtụtụ puku Celsius. Ngwurugwu niile dị na mbara igwe na-akwụ ụgwọ dị ukwuu site na ụzarị anyanwụ. Anyi achoputakwara na ikuku anaghi agbasa dika o si di na ikuku ikuku gara aga.
Na temomos anyị hụrụ magnetosphere. Ọ bụ mpaghara ikuku nke mpaghara ndọda nke ụwa na-echebe anyị pụọ na ikuku anyanwụ.
Ikpeazụ oyi nke ikuku bụ exosphere. Nke a bụ akwa dịkarịsịrị elu karịa nke ụwa na n'ihi ịdị elu ya, ọ bụ nke a na-akaghị aka ebighi ebi ma yabụ na ọ bụghị n'onwe ya ka ewere akwa nke ikuku. More ma ọ bụ obere ọ gbatịrị n'etiti 600-800 km n'ogo ka 9.000-10.000 km. Nke a oyi akwa nke ikuku bụ ihe na-ekewa mbara ụwa na mbara mbara na ya atọm mgbapụ. Ihe mejupụtara ya bụ hydrogen.
Nnukwu stardust dị na mbara igwe
Ka i si hụ, ihe dị iche iche na-eme na oyi akwa nke ikukus ma nwee ọrụ dị iche iche. Site na mmiri ozuzo, ifufe na nrụgide, site na oyi akwa ozone na ụzarị ọkụ ultraviolet, nke ọ bụla n'ime ikuku nke ikuku nwere ọrụ ya nke na-eme ndụ na mbara ala dị ka anyị si mara ya.
Akụkọ banyere ikuku
La ikuku na anyị maara taa ọ dịbeghị otú a. Ebe ọ bụ na e guzobere ụwa ruo taa, ọtụtụ nde afọ agafeela, nke a akpatawokwa mgbanwe nke ikuku.
Akuku ikuku nke mbụ ịdị adị sitere na mmiri ozuzo kachasị ogologo na ogologo oge na akụkọ ntolite nke mere n'oké osimiri. Ihe mejupụtara ikuku tupu ndụ dị ka anyị si mara na o bilitere mejupụtara methane. N'oge ahụ, ọ na -eme ihe karịrị ijeri afọ 2.300, ihe ndị dị ndụ na ndụ ndị a bụ ihe ndị dị ndụ methanogens na anoxicsNke ahụ bụ na ha achọghị oxygen iji bie ndụ. Taa methanogens bi na sedimenti nke ọdọ mmiri ma ọ bụ afọ nke ehi ebe enweghị oxygen. Thewa ka di obere ma anyanwu enwu pere aka, n’agbanyeghi, igwe methane na ikuku di ihe dị ka narị ugboro isii karịa ka ọ dị ugbu a na mmetọ. Nke ahụ sụgharịrị ka ọ bụrụ mmetụta griin haus siri ike iji nwee ike ịbawanye ogo ụwa, ebe ọ bụ na methane na-ejigide oke okpomọkụ.
Methanogens chịrị ụwa mgbe ihe mejupụtara ikuku na-egbu egbu. Aha njirimara: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Mgbe e mesịrị, na njupụta nke cyanobacteria na algae, ụwa juputara na oxygen wee gbanwee ihe mejupụtara nke ikuku ruo mgbe, obere obere, ọ ghọrọ ihe anyị nwere taa. Site na tectonics efere, ịhazigharị kọntinent nyere aka na nkesa carbonate n'akụkụ niile nke ụwa. Ọ bụ ya mere ikuku ji gbanwee site na ibelata ọnọdụ ikuku na-eme ka ọ na-ekpo ọkụ. Igwe ikuku oxygen na-egosi elu na ala dị elu ruo mgbe ọ ga-anọgide na-adịkarị na 15%.
Ọnọdụ mbụ nke methane. Aha njirimara: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » N'ígwé nke ikuku
Ndewo, ọ bụrụ na ọnọdụ ikuku ahụ erute ọtụtụ puku ogo C. Olee otu ọ ga-esi bụrụ na ụgbọelu ga-esi na ya gafee?
Kedu ihe bụ ọnọdụ okpomọkụ mgbe okpomọkụ gachara?
Daalụ n'ọdịnihu maka azịza gị
Ụlọ ọrụ LEONEL VENCE MURGAS dijo
Pedro .. ọ dịghị onye ọ bụla jisiri ike pụọ!
ihe niile bụ akụkọ nnukwu ụgha ... lelee vidiyo nke iss ma ọ bụ ihe adịgboroja niile ..
ma ọ bụ ka mma, lee anya na ihe oyiyi CGI nke ụwa, enweghị ezigbo foto ma ọ dịbeghị onye hụtụrụla satellite na-agagharị .. ka m gwa gị bro .. a ghọgbuola anyị
Zaghachi LEONEL VENCE MURGAS
“Na temomos anyị na-achọta ihe ndọta. Ọ bụ mpaghara ikuku nke mpaghara ndọda nke ụwa na-echebe anyị pụọ na ikuku anyanwụ. "
Echere m na na ahịrịokwu a, ha kwesịrị itinye ndọta ma ọ bụghị ike ndọda.
Ihe omuma a di nma nke oma nke oma nke oma… daalụ nke ukwuu… baara ndị anyị na-agụ akwụkwọ uru…
Achọrọ m ikele mmadụ ma ọ bụ onye kwere ka anyị gwa onwe anyị n'ụzọ doro anya ma dịkwa mfe. Ana m akwado ibe a, ọ bara ezigbo uru maka anyị bụ ndị na-agụ akwụkwọ na kọleji. DAALỤ NKE UKWUU
Luciana Wheel Ọnwa dijo
Ọfọn na peeji dị mma ma e nwere ihe ndị bụ ụgha ma ọ bụ nke ọma kọwara ekele maka nkọwa 😘😘😉😉😉
Zaghachi Luciana Rueda Luna
Na-azaghachi Pedro, ụgbọ mmiri ahụ nwere ike iguzogide okpomọkụ ndị a n'ihi ọta ọkụ
a na-ejikarị ihe ndị dị egwu.
gwa m ajuju aber
Nke a bụ ezigbo ozi ℹ ọ nwere ike inyere anyị niile bụ ndị mụtara echiche m chere na e nwere 4 oyi akwa ma enwere 5 😂😂😂
Zaghachi Daniela BB😂
M na-amụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-emeghe ma ihe ọmụma ahụ nyeere m aka nke ukwuu ma kọwaa ya nke ọma, ekele
Zaghachi ka o rebeca melendez
Ezigbo mma, daalụ.
Nnukwu aghụghọ, ihe niile bụ ụgha, ndị enyi, usoro agụmakwụkwọ niile nke ịgha ụgha enweghị ike ịpụ na mbara igwe, mkpuchi zuru oke, nyochaa Flat Earth ma teta.
Zaghachi HECTOR MORENO
christan roberto dijo
lee hector moreno Ekwenyere m na sayensị mana mepee ajụjụ gị karịa echiche gị ma jụọ onwe gị ihe kpatara ụwa ji kee usoro mmụta nwere oke mana ọ bụrụ na anyị enweghị ya, anyị ga-achọpụtarịrị ma ụwa dị larịị ma ọ bụ na eziokwu nke ụwa a Mana ebe anyị enweghị teknụzụ dị ugbu a, ị nweghị ike ịza, ị na-ekwu na anyị enweghị ike ịhapụ ụwa maka na ị na-ekwu na ọ bụghị ihe mkpuchi, ọ bụ eziokwu n'ihi na n'otu aka ahụ, mmadụ agaraghị agwa anyị ihe ọ bụla, ọ juru ya anya wee sị na ụdị a Ọ bụrụ na ụwa dị larịị ma site n’ebe ahụ malite nkwupụta ahụ na ọ bụrụ na anyị bi n’ụwa dị larịị ma ọ bụ gbaa gburugburu ma ha nyere anyị azịza dị mfe ọ dị okirikiri n’ihi na ọ bụghị ma ọ bụrụ na ọ dị larịị ike ụwa ga-adọta onye ọ bụla ma nguzozi ga-efunahụ ya ụwa n'ihi na n'ebe ụfọdụ ọ ga-abụ ezigbo oyi okpomọkụ n'abalị ụbọchị na ụdị itule ga-adị njọ n'ihi na anyị adịghị ebi ndụ dị otú ahụ kama ọ bụrụ na ụwa na-agbagharị na na gburugburu ụwa nile oyi okpomọkụ na ọ dịghị onye ga-abụdọtara otu nju nke ndọta ma abụ m naanị afọ iri na atọ m mụ anya maka ihe dịka afọ 13 nke nwere ike zaa ajụjụ gị ma ọ bụ kwụsị: 4: v
Zaghachi Christian roberto
Echeghị m na otu puku degrees ruru na thermosphere, ebe ọnwa na-agagharị gburugburu ụwa ruru ihe dịka + -160 degrees abụghị ihe ezi uche dị na ya, na Mercury nke dị nso na anyanwụ okpomọkụ m chere na echere m na ọ na-agbagharị gburugburu na ogo 600 n'ọtụtụ 1000, ya mere, ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya…. ọ bụ typo m chere.
Ndewo, daalụ maka ozi a, ahụrụ m ibe ahụ n'anya, ọ na-enyere m aka n'ọrụ ụlọ akwụkwọ na ozi ahụ bara uru.
Zaghachi Edwing Rodríguez
Na-aza Juan. Ọnọdụ ihu igwe ahụ na-adabere na anwụ ma ọ bụ na ọ naghị awa. Ikwu okwu banyere otu okpomọkụ bụ ihie ụzọ ị na-eme. Ọ na-agbanwe ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na radieshon nke anyanwụ abịarute ma ọ bụ na ọ bụghị. Dịka ọmụmaatụ, ọnwa ọdịda ga-eme na ìhè anyanwụ, ma ọ bụghị na oyi na-atụ.
Zaghachi Lisandro Milesi
Judith herrera kwuru dijo
Ahụrụ m ya n'anya, ozi ahụ dị mma na ruo n'ókè, ana m ekele gị nke ukwuu 🙂
Zaghachi judith herrera
Ndewo onye ọ bụla… !!!
Adị m ọhụrụ na saịtị a, ana m ekele gị nke ukwuu.
Anọ m na-agụ otu edemede banyere ike dị iche iche n'ụwa wee chọpụta na akụkọ ahụ zuru oke yana nke siri ike. Enweghị m olileanya ịga n'ihu na-amụtakwu ... site na Uruguay!
Switzerland chọrọ ịchekwa glacier si okpomoku ụwa
Cape Horn, bụ onye nchebe nke mgbanwe ihu igwe